JUNE&MAY: င ငါးသလောက်ပေါင်း
Posted by JuneOne at 11:14 PM
ကောင်းကင်ပြာ September 19, 2009 at 11:55 PM
အရမ်းကြိုက်တယ်၊ ငါးသလောက်ပေါင်းအကြိုက်ဆုံး မို့လို့ အဲဒါလေး ပေါင်းတတ်အောင် သင်ထားတယ်၊ တနလာင်္နေ့ ပေါင်းမှာ တို့လဲ၊ ခုတော့ သားရည်ကျသွားတယ်ကွယ်၊ သားသားနဲ့ မေမေ နေကောင်း အဆင်ပြေပါစေး)
Rita September 20, 2009 at 12:08 AM
ဒါဆို ငါးက အပျို မဟုတ်ဘူးပေါ့။
khin oo may September 20, 2009 at 1:06 AM
PAUK September 20, 2009 at 1:16 AM
SDL September 20, 2009 at 9:19 AM
ယိုးဒယားဈေးက YweTee မှာလည်း ရှိသလား... ဂျွန်ဝမ်းတို့ အဲ့မှာနေသလားလို့....။
subuueain September 20, 2009 at 9:43 AM
ှုငါးသလောက်ကို english လိုဘယ်လိုခေါ်လဲအမ။ ငါးမြင်ရင်မသိလို့ ပါ။ :)
JuneOne September 20, 2009 at 11:15 AM
သောကြာ၊စနေ ဆိုရင် ညနေပိုင်းလူကိုကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတာပဲ။
JuneOne September 20, 2009 at 11:18 AM
ဟိဟိ မသိပါ။ငါးကိုမြင်တာနဲ့ သိနေလို့။
nu-san September 20, 2009 at 1:22 PM
ငါးသလောက်စားချင်တယ်ကျော့ရေ... ရိုးရိုး မန်ကျီးမှဲ့နဲ့ ချက်တာလည်း စားချင်တယ်.. ငါးကို ပါဆယ်ပို့ပေး.. :D
yanmyo September 20, 2009 at 3:16 PM
ဟာ..ငါးသလောက်ပေါင်းဆိုလို့ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဖမ်းရတဲ့ငါးတွေပို့ လိုက်ပါတယ်၊ နေဦး ငါးသလောက်ရာသီရောက်မှ ကိုဒူကဘာ တို့ဘက်သွားဖမ်းဦးမယ်..
မီယာ September 20, 2009 at 4:00 PM
စားချင်နေတာ ကြာပြီ ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက မစားခဲ့ရဘူး။ pressure cooker လက်တည့်စမ်းချင်တာလည်း ပါတယ်
ကြိုက်တယ်ခင်ဗျ။ တည့်တော့မတည့်ဘူး ငါးသလောက်ဥကျော်စားချင်တယ်။ :) အခုတော့ မျှော်ငေးဆွေးပေါ့
လွတ်ငြိမ်းလေပြေ (breeze) September 21, 2009 at 2:01 AM
အစ်မဝမ်း အိပ်ငိုက်မှာ မကြောက်ဘူးလားး)
ဖိုးစိန် September 21, 2009 at 4:54 AM
စကာင်္ပူလာလည်တဲ့အချိန် ငါးသလောက်တွေရှိရင်ကောင်းမယ်..ထမင်းပူပူနဲ့ သံပုရာသီးလေးညှစ်ပြီး ခုချက်ထားတဲ့ဟင်းနဲ့စားလိုက်ရရင်တော့.. ဟင်းးးးးး
အောင်သာငယ် September 21, 2009 at 10:00 AM
စားချင်တယ်... စားချင်တယ်... ဒွတ်ခပါပဲ...း(
khin oo may September 21, 2009 at 10:10 AM
Hi sister,m please tell me how to go thai wet mart, i aslo stay near yew tee.
My block is near Limban mart.
mae September 21, 2009 at 5:42 PM
JuneOne September 22, 2009 at 11:24 AM
ANOYs:Limban မှာနေတာဆိုရင် Limban ဘက်အခြက်းကနေ street 53,54ဘက် choa chu kang north 5လမ်းမကြီးအတိုင်းလျှောက်ရင် cck swiming pools ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။အဲဒါကိုဖြတ်ပြီးရင် လုံးချင်းတိုက်ပုလေးတွေကို ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်။မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ အခြားဖက်မှာ regent secondary schoolရှိတယ်။အဲဒီ့ကျောင်းရဲ့အဆုံးမှာ
ကွန်ဒို၁ခုရှိတယ်။အဲဒီကျောင်းနဲ့ကွန်ဒိုနဲ့အစပ် အခုလျှောက်နေတဲ့ တိုက်ပုလေးတွေအဆုင်္မှာ မီးပွိုင့် ရှိတယ်။(လမ်းမှာလည်းမီးပွင်း ၃ခုလောက်ဖြတ်ရသေးလို့မှားမှာစိုးလို့)အဲဒီရောက်ရင် ညာဘက်ကိုချိုးလိုက်
ချောင်းတစ်ခုကိုဖြတ်ဆောက်ထားတဲ့ တံတားတွေ့လိမ့်မယ်။ဆက်လျှောက်ရင် မီးရထားသံလမ်း ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ပြီးရင် ခွေးထရိန်နင်စင်တာကတွေ့ရင် အဲဒီဘက်အချမ်းကို ကူးပြီး အဲဒါကိုကျော်တာနဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုချိုးရင် Caltaxဓတ်ဆီဆိုင်တွေ့ရင် အဲဒီ့ဆိုင်အဆုံး ဘယ်ဘက်ကိုချိုးတာနဲ့ yewtee industrial estate ဆိုတာကိုတွေ့ရင် ရောက်ပြီ။ဆိုင်ကြီး၎ ဆိုင်ရှိတယ်။
မနက်ဖက် မရောင်းဘူး။ညနေ ဘက်ပဲရောင်းတာ။တို့က ကျောင်းနာမှာနေတာဆိုတော့နီးတယ်။
Ok. ama, i try to go there. Thanks for your information.
ဆော်ဒါကို soda လို့ ပြောပြီးဝယ်ရမယ်ထင်တယ်..
တရုတ်ဆိုင်ဆိုရင်တော့..蘇打粉 (ဆူးသာဖိန်) လို့ ပြောဝယ်ကြည့်လေ..
သက်ဝေ September 28, 2009 at 10:22 PM
အော်.. ထမင်းစားပြီးချိန်မှာ လာတွေ့လို့ တော်တော့တယ်...
ကျွမ်းကျင် အဆင့် ၁ ထင်ပါရဲ့...
T T Sweet October 6, 2009 at 10:36 PM
စားချင်လိုက်တာ ငါးသလောက်ပေါင်း ... မစားရတာ ၁၀နှစ်ကျော်ပြီ ... အိမ်ကလူက သွေးတက်လို့ မစားရဲဘူးဆိုလို့ .... သူမရှိတုံး ပေါင်းစားမယ် ... ရှယ်ပေးတာ ကျေးဇူး။
နှင်းဆီပန်းချစ်တဲ့ကောင်မလေး October 12, 2009 at 1:45 PM
ko9October 18, 2009 at 6:56 PM
မြစ်ကျိုးအင်း November 10, 2009 at 1:20 PM
ငါးသလောက်ပေါင်း သိပ်ကြိုက်တယ် ငါသလောက်ဥကြော်လည်း အလွတ်မပေးတတ်ဘူး
(ဒီကိုလာ အိမ်ကနေ TW ဆိုလို့ ရောက်လာတာ ထိုင်ဝမ် ကပဲထင်လို့လေ
ဒီရောက်တော့ ဟင်းမြင်တာနဲ့ လာရင်းကိစ္စမေ့သွားတယ်)